သူမပြောသော သူမအကြောင်း - Dr Mg Nyo [အပြာစာပေ]
“စိတ်ပျက်လိုက်တာ အမေရယ်…. ရှေ့ရေးကို မတွေးချင်တော့ဘူး… သေသာ သေလိုက်ချင်တော့တယ်”
“အဲ့လိုလည်း ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ သမီးရယ်.. ဘယ်သူမှတော့ ကြုံချင်ပါ့မလဲ… ဒါမယ့်လည်း ဖြစ်ချိန်တန်လို့ဖြစ်လာတော့ ရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့”
မိုးတဖွဲဖွဲကျနေသော ဇူလိုင်လ ညနေခင်း တစ်ခုတွင် အသက် ၃၆ နှစ်အရွယ် အရပ် ၅ ပေ ၄ လောက်ရှိပြီး တင်ကားရင်စွံကာ အသားအရည် ညှိညှိညက်ရှိသော မိန်းမတစ်ယောက်နှင့် အသက် ၇၀ ခန့် အဘွားအိုအရွယ် မိန်းမတို့မှာ ဝမ်းနည်းပူဆွေးသော မျက်နှာ ပူဆွေးသော သောကများ ပြည့်နှက်လျက်ရှိသည်။
ထိုမိန်းမမှာ မအေးမြင့်ဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်ကျော်ခန့်ကမှ သူမ ယောကျ်ား ဆုံးပါးသွားကာ အသက် ၄ နှစ်ခန့် ကလေးတစ်ယောက်နှင့် ဆက်လျှောက်ရမည့် ဘဝလမ်း၏ အခက်အခဲများကိုစဉ်းစားကာ တွေးပူနေလေသည်။
“သမီး ဒီရန်ကုန်မှာပဲ အထည်ချုပ်စက်ရုံမှာ လုပ်နေရင် သားလေး နောင်ရေးရော ကျောင်းပညာရေး ကျန်းမာရေးကအစ အဆင်မပြေဘူး အမေ… ဒီအလုပ်မဟုတ်တောင် တခြားအလုပ်တစ်ခု လုပ်မှဖြစ်မယ်”
“အမေလည်း ဝိုင်းကူနေတာပဲလေ သူအဖေရှိတုန်းကလို အလုံးစုံ အဆင်ပြေတယ်လိုတော့ ဘယ်ဟုတ်မလဲ ကြံဖန်ရမှာပေါ့”
” ဟုတ်တော့ ဟုတ်တယ်လေ ဒါမဲ့ ကလေးနောင်ရေး အမေလည်း အသက်ကြီးပြီ အမေ့ကိုလည်း မှန်တာပြောရင် သမီးဘာကျေးဇူးမှ မဆပ်ရသေးဘူး သေချာဝင်ငွေလေးရတဲ့ အလုပ်လေး ပြောင်းလုပ်ချင်တယ်”
“သမီးရယ် အမေကတော့ မလိုပါဘူး မြေးလေးနဲ့သမီးလေး အဆင်ပြေတာပဲ မြင်ချင်တယ်”
“ကော့သောင်းဘက်က ကိုမြင့်သိန်း (ကွယ်လွန်ပြီးသော သူမယောကျာ်း) အစ်မ မမြင့်ဌေး သူတို့အသိ စားသောက်ဆိုင်မှာ အလုပ်သွင်းပေးမယ် နေစရိတ် စားစရိတ်ငြိမ်း ၂ နှစ်လောက်စုပြီးရင် ရန်ကုန်မှာတစ်ခုခုလုပ် အိမ်ဆိုင်လေးဖွင့် အခြေကျပေါ့တဲ့ အကြံတော့ပေးတယ်… အမေ… သမီးသွားလုပ်ကြည့်မယ် စဉ်းစားထားတယ်”
” သမီး ကောင်းသလိုလုပ်ပေါ့ ..”
“သားလေးကိုတော့ အမေနဲ့ ထားခဲ့လိုက်မယ်လေ သမီးပိုက်ဆံ လှမ်းပို့ပေးမယ် သူမူကြိုပဲ ရှိသေးတော့ သိပ်လည်း အလုပ်မများသေးဘူးဆိုတော့ “
“ရတယ် ငါက မြေးမျက်နှာ မြင်နေရရင် ပျော်နေတာ..”
ညသန်းခေါင်ဟာ တိတ်ဆိတ်နေပါတယ်.. ခြံထဲမှ ညမွှေးပန်း အနံလေးများဟာ သင်းပြန့်နေသလို မိုးရွာပြီးခါစ လေပြေဟာလည်း အေးမြစွာ အိမ်ထဲသို့ တိုးဝင်လာပါတယ်… အိပ်ရာထဲတွင် ရှိသော မအေးမြင့် ရင်ထဲတွင်တော့ ပူလောင်နေပါတော့တယ်.. ဘေးမှအပြစ်ကင်းစင်စွာ အိပ်ပျော်နေသော သားလေးမှာ လောကကြီးရဲ့ ရိုက်နှက်မူများကို မသိကာ အိပ်စက်နေပါတော့တယ်..။
သူမ အတွေးထဲမှာတော့.. သားလေးကိုခွဲပြီး သွားရမလား.. သားလေး အနားမှာနေပြီးပဲ တက်လမ်းမရှိသော ယခုအလုပ်တွေ ဆက်လုပ်နေရမလား အစရှိသည်တို့ ပြည့်နှက်နေပါတော့တယ်..။
“ငါသွားသင့်ပါတယ်လေ ငါ့သားလေး အနာဂတ်ပဲ သူနဲ့ ခဏခွဲရတာပဲ.. “
ပြတ်သားသော ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအား မျက်ရည် တစ်စက်စက်ကျကာ သားငယ်အားဖက်ကာ အိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်။
“အေး သမီး ဂရုစိုက်သွား ဖုန်းဆက်ဖို့ မမေ့နဲ့နော်..”
“မေကြီး မေကြီး သားဆီဖုန်းဆက်နော်”
မျက်ရည်စက်လက်နဲ့ သူ၏အားကိုးရာ မိခင်နဲ့ ခွဲခွာရတော့မယ့် ကလေးငယ် ဖခင်ရဲ့ ရာသက်ပန် ခွဲခွာခြင်းခံရရှာသော ကလေးငယ်ကိုကြည့်ပြီး မအေးမြင့် ရင်ထဲ ပူလောင်ကာ ငိုကျွေးမိပါတော့တယ်…။
“အယ် သမီးရယ် ခရီးသွားခါနီး လာခါနီးကြီး ငိုမနေပါနဲ့… သွားတော့ လမ်းမှာ ဘုရားစာရွတ်ဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော်”
“ဟုတ်ကဲ့ အမေ… သားရေ သွားပြီ လိမ္မာနေခဲ့နော်”
ကော့သောင်းမြို့ဟာ သာယာလှပသော မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီး နယ်စပ်မြို့ဖြစ်သောကြောင့် ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ် လုပ်ငန်းများ စျေးများ စားသောက်ဆိုင်များအပြင် မှောင်ခိုစျေးကွက်များပင် ရှိသောကြောင့် အလွန်စည်ကားသော မြို့တစ်မြို့ ဖြစ်သည်။
သူမ မနက် ၇ နာရီ ကော့သောင်းမြို့ အရောက်တွင် မိန်းမသားတစ်ဦးအနေနဲ့ ရှေ့ဆက်ရမည့် လမ်းအတွက် သံသယများပင် ပိုမိုဝင်လာပါတော့တယ်…။ ငါရှေ့ဆက်နိုငိပါ့မလား… အဆင်ပြေပါ့မလား အတွေးများကြီးစိုးနေခိုက်
“အေးမြင့်ရေ အေးမြင့်… “
ခေါ်သံကြား၍ လှည့်ကြည့်လိုက်ရာ သူမယောင်းမ မမြင့်ဌေးကို တွေ့၍ အနည်းငယ် အားတက်မိကာ..
“အေးရယ် ငါတို့က ဟိုဘက်ဂိတ် သွားစောင့်နေတာ.. ၇ နာရီကတည်းက ကားတွေဆိုက်ပြီး နင့်ကိုမတွေ့လို့ ဒီဘက်လိုက်လာတာ.. လာ လာ သွားရအောင် အထုပ်တွေပေး သုံးဘီးငှားလာတယ်”
ယောင်းမနဲ့အတူ လိုက်ပါလာပြီး လမ်းတလျှောက်ကုန်တင်ကားများ ဆိုင်ကယ်များ ပြည်နှက်နေပြီး.. စျေးသည်များဖြင့် ပြည့်နှက်နေပါတော့တယ်…။
“အစ်မတို့အိမ်က ဒီမြို့ထဲနဲ့ သိပ်မဝေးဘူးလေ နောက်နေ့ကျ မြို့ထဲကို လိုက်ပြပေးမယ်”
” ညာဘက်ကလမ်းပေး ရှေ့ကတစ်လမ်းကျော်… နဲနဲလေး ဝင်လိုက်ရုံပဲ..”
ကယ်ရီဆရာအား လမ်းပြပေးပြီး …
ထို့နောက် မမြင့်ဌေးတို့အိမ်ရှေ့ ရောက်ပါတော့တယ်.. မမြင့်ဌေးတို့အိမ်မှာ နှစ်ထပ်ပျဉ်ထောင်အိမ်ဖြစ်ပြီး.. ခြံဝင်းအကျဉ်းလေးရှိပြီး ပန်းပင်များ စိုက်ပျိုးထားပြီး နေချင်စရာဖြစ်သည်…။
“လာ လာ နင့်အစ်ကို ကိုအောင်ဝင်းလည်း မရှိဘူး မနက်ကတည်းက ကုန်ကားထွက်သွားတယ်.. နောက်အပတ်လောက်မှ ပြန်လာမှာ.. နင့်တူ ဇာနည်ကတော့ ဘော်ဒါမှာ… တို့ပဲရှိတယ် အထုပ်တွေချ”
” လာ လာ နင့်အခန်း လိုက်ပြပေးမယ်..”
အပေါ်ထပ်သို့ တက်သွားပြီး ဘယ်ဘက် တံခါးပိတ်ထားသော အခန်းကို လက်ညှိးထိုးကာ..
“ဒါက နင့်တူအခန်း.. သူဘော်ဒါ ရောက်နေလို့ ပိတ်ထားတာ… ကပ်ရပ်က ညည်းအခန်း အားမနာနဲ့.. ရေမိုးချိုးနားတော့…. ပြီး ထမင်းစားမယ် အောက်ဆင်းလာခဲ့”
တနေကုန် ပင်ပန်းလာသောကြောင့် လူက နုံးချိနေကာ ရေချိုးလိုက်ရသောကြောင့် လန်းဆန်းသွားပြီး.. သနပ်ခါးရေကျဲလိမ်း အဝတ်အစားလှဲကာ အောက်သို့ ဆင်းလာခဲ့ပါတယ်…။
“လာ လာ အေးရေ အကုန်ပြင်ဆင်ပြီးသား”
“ဟင်းတွေ များလှချည်လား ဧည်သည်လည်း မဟုတ်… အစ်မရေ မလိုပါဘူး အားနာစရာ”
“ဧည်သည့်သိပ်လာတာ မဟုတ်ဘူး…. တို့အိမ်က အမြဲ ငါတစ်ယောက်တည်း ဖြစ်နေတာ.. စားသာစား တစ်ညလုံး ကားစီးလာတာဆိုတော့”
ဝက်သား၊ ခရမ်းချဉ်သီးငပိချက်၊ ဘူးသီးဟင်းချို၊ ငပိရည်တို့စရာနဲ့ ခရီးပန်းလှသည် ဗိုက်ဆာဆာနဲ့ ပုံမှန်ထမင်းတစ်ပန်းကန်တောင် မကုန်သော်လည်း မြိန်ရှက်စွာ များများစားမိပါတော့တယ်..။ ထမင်းစားပြီး အိမ်ရှေ့တွင် ယောင်းမနှင့်စကားစမြည် ပြောဆိုပြီး
“ကျွန်မကို ဘယ်မှာ အလုပ်သွင်းပေးမှာလဲ”
“မြို့စျေးနားက စားသောက်ဆိုင်နားမှာလေ ညည်းက အတွက်အချက်ရော ဟင်းချက်တာရော ရတယ်လို့ သူတို့ကလည်း လူလိုလို့တဲ့”
“လစာက (….) သိန်း ရမယ်ပြောတယ်… စားတာကလည်း အဲ့မှာစားပေါ့.. အဆင်ပြေ တိုးပေးမှာပေါ့”
“ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးပါ အစ်မရယ်”
“ရပါတယ်အေ ငါ့မှာလည်း တာဝန်ရှိတာပဲ ငါ့မောင်မိန်းမပဲကို… တူလေးကော နေကောင်းရဲ့လား”
” အင်း သူ့အဘွားနဲ့တော့ ထားခဲ့တာပဲ.. မခွဲချင်ပေမယ့် သူဘဝအတွက်ပဲလေ”
၂ နာရီခန့် စကားစမြည် ပြောဆိုပြီး..
“သွားအိပ်တော့လေ အေးမြင့် ပင်ပန်းလာတာပဲ… စောင်တွေ ခြင်ထောင်တွေ အသင့်ပဲ”
“ဟုတ် ဒါဆို အိပ်လိုက်ဦးမယ်နော်”
ဟူးး ကံကောင်းပါစေ အလုပ်မှာ အဆင်ပြေတဲ့လူတွေနဲ့ တွေ့ပါစေ… ဘဝမှာ တစ်ခါလောက် ကံကောင်းပါစေ သောကသံသရာတွေလည်ကာ တွေးတောနေပြီး ခရီးပန်းလာသောကြောင့် အိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်..။
“အွတ် အွတ် အွတ်”
“တိုးတိုး… ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ်”
ညသန်းခေါင် အသံကြားရမှ နိုးလာကာ အသံမှာအောက်ထပ် မမြင့်ဌေးတို့ အခန်းမှဖြစ်ရာ
“အွတ် အွတ် အွတ် အွတ် အမလေး အမလေး”
သူမယောက်ျေား ကိုအောင်ဝင်းများ ပြန်ရောက်နေတာလား.. မဟုတ်ပါဘူး ပြောတော့ နောက်အပတ်မှ ပြန်လာမှာဆိုတော့ ….. အောက်ထပ်သို့ အသာဆင်းပြီး အခန်းဝချောင်းကြည့်မိရာ.. မမြင့်ဌေးမှာ ပေါင်ကားကာ ခြေထောက်ကို အပေါ်ထောင်ထားပြီး အပေါ်မှ လူတစ်ယောက်က အတင်းဆောင့်လိုးနေလေတော့သည်…။
“ဘွတ် ဘွတ် ဖတ် ဖတ် အွတ် အမလေး”
“အမလေးး အမလေးးး ဘွတ် ဘွတ်”
“တိုးတိုးလုပ် ကျုပ်မောင် မိန်းမ ရောက်နေတယ် ကြားသွားဦးမယ် .. “
“လုပ်နေတာပဲ ကောင်းလို့ နင့်အဖုတ်က လိုးရင်းအသံကျယ်သွားတာ လီးစုပ်ပေးဦး လာ”
ဆိုကာ ထိုသူမှာ အဖုတ်ထဲမှလီးကို နုတ်ပြီး မမြင့်ဌေး ပါးစပ်ရှေ့ တေ့ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ လီးကြီးမှာ တုတ်ခိုင်ကြီးမားကာ စောက်ရည်များဖြင့် ပြောင်လက်နေပြီး ထိုသူမှာ အသက် ၄၀ ကျော်ခန့်ရှိပြီး အသားမဲမဲ ခန္ဓာကိုယ်တုတ်ခိုင်ကာ အနည်းငယ်ဝပြီး ကုတုံးနဲ့ ဖြစ်သည်။
“ပြွတ် ပလွတ် ပလပ် လပ်”
မမြင့်ဌေးမှာ လီးကြီးကို အငမ်းမရ စုပ်နေပြီး ထိုသူလက်များကလည်း မမြင့်ဌေး နို့ကြီးများနှင့် အဖုတ်အား ကူးလူးကာ ပွတ်သပ်နေပါတော့တယ်…။
သူဖောက်ပြန်နေပါလား ဟုတ်ပါတယ် သူလည်း လင်နဲ့ အမြဲဝေး အိမ်မှာတစ်ယောက်တည်း နေရတာဆိုတော့။ မမြင့်ဌေးမှာ အသက် ၄၀ ခန့် ရှိပြီး အရပ်ပု တင်ကြီးရင်ကြီးတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ အဖုတ်ကြီးမှာလည်း တင်းရင်းကာ အမွှေးများ အလွန်ပေါက်နေပြီး ကလေးတစ်ယောက် အမေ ဖြစ်သောကြောင့် နို့အုံများ တွဲကျကာ နို့သီးခေါင်းများမှာလည်း မဲနက်ကြီးမားပြီး ရမက်ထန်သော ပုံစံရှိပါသည်။
“ရပြီ လိုးရအောင်.. ကုန်းပေးပါလား”
ထိုသူမှ ပြောလိုက်သောအခါ မမြင့်ဌေးမှာ ကုတင်စောင်းတွင် ကုန်းပေးပြီး ထိုသူမှာ မတ်တပ်ရပ်ကာ လီးကြီးကို ထိုးထည့်လိုက်ပါတော့တယ်။
“အေးပါဟ နင်ကလည်း လိုးမယ် မကြံသေးဘူး”
“ဖွတ် ဖွတ် ဖတ် ဖတ် ဘွတ် ဘွတ်”
စောက်ဖုတ်ထဲ လီးအဝင်အထွက် အသံ လူနှစ်ယောက်အပြိုင် ညည်းသံ.. ဥမှ အဖုတ်ကို ရိုက်သံများဖြင့်.. အပြင်မှ ကြည့်နေသော မအေးမြင့်မှာလည်း လင်သည်ဆုံးပါးသွားပြီးနောက် ပျောက်ဆုံးသွားသော ကာမစိတ်များ ပြန်လည်ထလာပါတော့တယ်။
“ဖတ် ဖတ် အအအအ ဖြည်းဖြည်း.. အွတ်”
“ရှီးးးးးး အအအအ ဖတ် အမလေးး”
“အအအအအအ ဖတ် ဖတ် ဘွတ်”
ထိုသူမှာ လိုးအားကောင်းပြီး.. အရှိန်မြင့် လိုးသည်နှင့်အမျှ မမြင့်ဌေးမှာလည်း ဖင်ကို နောက်ပြန်ဆောင့်ကာ လိုးပွဲမှာ ဘေးကကြည့်နေသူအဖို့တောင် မျက်တောင်မခတ်နိုင်တောဘဲ အေးမြင့် စောက်ဖုတ်မှာလည်း အရေများ စိုလာပါတော့တယ်..။
“ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် အွတ် အွတ်”
“အအအအ ဖတ် ရှီးးး အအအအ”
“ပြီးပြီ ပြီးပြီ ..အအအအ အားးး”
ထိုသူမှာ လရေများ ပန်းလွှတ်ပြီး လီးကို မချွတ်ဘဲ ကျောပြင်ပေါ်မှီကာ မှိန်းနေပါတော့တယ်။
” အမလေးးးလေး ကောင်းလိုက်တာ… ရှင်လိုးချလိုက်တာ..”
“မလိုးရတာ ကြာပြီလေ နင့်ယောကျ်ား အောင်ဝင်း ကုန်ကားထွက်တုန်း ငါလာလိုးရတာ.. တစ်ညလုံး လိုးမှာ..”
“ဒီနေ့တော့ မရဘူးရှင့် နောက်မှနော်… အေးမြင့်ကြားမှ အကုန်ပေါ်မယ် အမြဲငတ်နေမယ်… ချွတ်တော့ သေးသွားပေါက်ဦးမယ်”
မအေးမြင့်လည်း အပေါ်အခန်းထဲ ပြန်တက်လာပြီး မအိပ်ခင် သူမလင်တော်မောင်နှင့် ကာမဆက်ဆံခဲ့ပုံတွေကို ပြန်တွေးကာ လင်တော်မောင် လွမ်းသောစိတ်ဖြင့် ပြန်အိပ်လိုက်ပါတော့တယ်…။
မအေးမြင့် ခရီးပန်းသည်ကတကြောင်း.. သူမယောင်းမ ဖောက်ပြန်နေသည်ကို ကြည့်မိသောကြောင့်တကြောင်း.. မနက် (၉) နာရီကျော်မှ အိပ်ရာထလာပါတော့တယ်.. ရေမိုးချိုး မျက်နှာသစ် သနပ်ခါးဖြီးလိမ်းနေစဉ် သူမမရီး အပေါ်တက်လာပြီး..
“အေးရေ လုပ်လုပ် မနက်စာ ပြင်ထားတယ်… ပြီးရင် မြို့ထဲ လိုက်ပြပေးမယ်”
“ဟုတ်ကဲ့ အစ်မရေ ညက နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ကို အိပ်ပျော်သွားတာ ခရီးပန်းလာလို့ထင်တယ် တုံးခနဲပဲ”
သူမ ညက အဖြစ်အပျက်အား မသိသော ပုံစံလုပ်ကာ ပြောလိုက်ပါတော့တယ်..။
“အစ်မ အလုပ်ဝင်မယ့် နေရာလေးလည်း လိုက်ပြပေးပါဦး”
“အေးလေ တို့မြို့ထဲ ခဏပတ်ကြည့်ပြီး အဲ့ဆိုင်သွားကြမယ် ဆိုင်ရှင် ဦးကျော်ဝင်းက သဘောကောင်းတယ်…. ဆိုင်မှာ ဝန်ထမ်းတွေလည်း ရှိတယ်… ညည်းပျော်သွားမှာပါ”
“ဘီယာ အရက်တွေပါရသလား အစ်မ”
“အေး အခုခေတ်က အဲ့ဒါတွေပဲ အောင်မြင်တာလေ ဒါတွေတော့ ပါတာပေါ့”
အေးမြင့်ရဲ့ ညှိးငယ်သွားသော မျက်နှာကို မြင်သောအခါ သူမ မရီးက..
“ကြည့်ရှောင်ပေါ့အေ ညည်းလည်း အပျိုမှ မဟုတ်တာ ကိုယ့်လက်ရှိ အခြေအနေ အဆင်ပြေသွားဖို့ အဓိကမလား”
“လာ လာ မနက်စာစား တို့ခဏနေ ထွက်ကြမယ်”
ထိုနောက် ယောင်းမနဲ့အတူ အဝတ်အစားလဲ ပြင်ဆင်ကာ ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ ပြည်တော်အေးဘုရားသို့ သွားရောက်ဖူးမြော်ပြီး.. အေးမြသော ဘုရားရိပ်အောက်တွင် သူမဘဝ အဆင်ပြေ ချောမွေ့စေရန် သားအမိနှစ်ယောက် ဘဝလမ်း ချောမွေ့စေရန် ဆုတောင်းကာ မြို့ထဲသို့ ထွက်လာခဲ့ကြသည်။
“အစ်မရေ မမြင့်ဌေး ဒီတနင်္သာရီဒေသက စည်းကားလှသားပဲနော်”
“အေးလေ ကုန်ရောင်း ကုန်ဝယ်လည်း ဖြစ်ထွန်း… နေရတာ မဆိုးပါဘူး… ငါတို့တော့ မွေးကတည်းက နေလာလို့လားမသိ ကိုယ့်မြို့ ကိုယ့်ဒေသကို ချစ်တယ်”
သူမတို့နှစ်ယောက် မြို့အနှံ့ လျှောက်လည်ကာ မြို့စျေးအနီး “စံပြ” စားတော်ဆက်ဟု ရေးထားသော ဆိုင်တဆိုင်သို့ ဝင်ကာ…
“အေးရေ ဒီဆိုင်လေ ညည်းကို အလုပ်သွင်းပေးမှာ”
စားသောက်ဆိုင်မှာ ကျယ်ဝန်းပြီး.. မြို့လယ်ခေါင်ကျခြင်း.. နေရာထိုင်ခင်း သန့်ပြန့်ခြင်းရှိပြီး Flat TV နှစ်လုံး ဆင်ထားကာ.. ” ယနေ့ မန်ယူ-ချဲလ်ဆီးပွဲ ပြမည်” ဟု ဆိုင်းဘုတ် ထောင်ထားပါသည်။
ထိုခဏတွင် မန်ယူအသင်းအား အိပ်ရေးပျက်ခံ အားပေးတတ်သော သွားလေသူ လင်တော်မောင်အား သတိရမိသောစိတ်သည် ဖြတ်ခနဲ ရောက်ရှိလာပါတော့တယ်… ထို့နောက် ထိုစိတ်ကိုဖျောက် ဆိုင်ဝန်းကျင်အား ကြည့်မိရာ အပေါက်ဝနှင့် မလှမ်းမကမ်းနေရာတွင် လူအချို့ ဘီယာထိုင်သောက်နေပြီး သူမတို့အား မသိမသာ လှမ်းကြည့်နေပါတော့တယ်…။
” လာ လာ မမြင့်ဌေးတို့…”
အသံလာရာသို့ လှမ်းကြည့်လိုက်ရာ အသက် ၅၀ ခန့်ရှိပြီး ခပ်ဝဝ ဗိုက်ပူပူ လူကြီးတစ်ယောက်ကို တွေ့လိုက်ရသောအခါ မမြင့်ဌေးမှ…
“အေးမြင့်ရေ အဲ့ဒါ ဦးကျော်ဝင်းလေ ဆိုင်ပိုင်ရှင်ပေါ့..”
“ဦးကျော်ဝင်း ဒါကျွန်မ ပြောထားတဲ့ ရန်ကုန်က အေးမြင့်လေ… မောင်လေးမိန်းမ…. မောင်လေးဆုံးတော့ ဒီမှာ စုမိဆောင်းမိအောင် အလုပ်လေး လုပ်ချင်လို့လေ…”
“လာကြ လာကြ ထိုင်ကြပါဦး”
ဦးကျော်ဝင်း ထိပ်ပြောင်၍ ဆံပင်ကျိုးတဲကျဲတဲပေါက်ကာ အရပ် ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းရှိပြီး… သွားများမှာ ကွမ်းစားထားသောကြောင့် ရဲနေပါသည်။ စကားပြောသောအခါ လူကိုဝါးမတတ် ကြည့်တတ်ပြီး ရယ်သောအခါ သွားများအား ဖြဲ၍ အသံထွက်အောင် ရယ်မောကာ စကားပြောသောအခါ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ပြောတတ်သူဖြစ်ပြီး ဗိုက်ပူ၍ ဆူဖြိုးထွားကျိုင်းသော ကိုယ်ခန္ဓာရှိလေသည်။
“ဒီမှာ တလောက လုပ်သွားတဲ့လူက ယောကျာ်းယူဖို့ ပြန်သွားလို့… ဒီက နာမည် ဘယ်လိုခေါ်လဲ”
“အေး အေးမြင့် အလုပ်ဝင်မယ်ဆိုတော့ အဆင်ပြေတယ်… ဆိုင်က ညဆိုရင် လူကျတယ်… နေ့လည် နေ့ခင်းတော့ အေးဆေးပါ… တခါတလေ ငွေကိုင် တခါတလေ စားပွဲထိုးလေးတွေ ကြီးကြပ်ပေး… ဆိုင်မန်နေဂျာ သဘောမျိုးပေါ့”
“ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ်ရှင် “
“အစားက နေ့လည်ရော ညစားပါ စားပြီးမှပြန် လစာက (….) သိန်းရမယ်… အဆင်ပြေလား အေးမြင့်”
“ဟုတ်ကဲ့ ဘယ်အချိန် ဆင်းရမလဲမသိ”
“ရတယ် မနက်ဖြန်သာ စဆင်းတော့”
ထို့နောက် သူမယောင်းမနဲ့ ပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်။အပြန်လမ်းတွင် သူမ ယောင်းမမှ
“ဦးကျော်ဝင်းက ဒီမှာ ဆိုင်လာဖွင့်တာလေ သူတို့က မန္တလေးဇာတိ မိန်းမနဲ့ ကလေးတွေက မန္တလေးမှာ”
“ညည်း တဖြည်းဖြည်း အလုပ်က သင်သွားမှာပါ… ညည်း ဘွဲ့ရလို့လည်း ပြောထားတော့ ယုံကြည်မှုနဲ့ ခန့်တာ”
“ဟုတ်ကဲ့ အစ်မ ..”
ထိုနှင့် အိမ်ရောက် ရေမိုးချိုး ညစာ စားသောက်ကာ အိပ်ရာဝင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုနေ့တွင်လည်း ညသန်းခေါင် အပေါ့အပါးသွားဆင်းကြည့်ရာ.. အသားမဲမဲနဲ့ ကုတုံးနဲ့လူမှာ မမြင့်ဌေးကို လိုးနေသည်ကို ထပ်မံတွေ့ရပါသည်။
မနေ့က အတိုင်း ချောင်းကြည့်မိရာ မမြင့်ဌေးမှာ ဖင်ဘူးခေါင်ထောင်နေပြီး ကတုံးနဲ့လူမှာ ပုဆိုးဂွင်းသိုင်းကာ လိုးနေခြင်းဖြစ်သည်။ လိုးချက်များမှာ ပြင်းထန်လာပြီး.. လိုးဆောင့်လိုက်တိုင်း မမြင့်ဌေးမှာ ရှေ့ကို ငိုက်ကျနေပါတော့တယ်.. မိုးမမြင် လေမမြင် လိုးနေကြပြီး
” အူးးးး အူးးးအွတ် ဖြည်းဖြည်း…”
“အမလေးးလေးး ဖင်ပြဲပါပြီ ဖြည်းဖြည်းပါတော့ ရှေ့အပေါက်လို မဟုတ်ဘူး.. ဖြည်းဖြည်းလိုးပါရှင့် ဘွတ် ဘွတ် ..”
ထိုကတုံးမှာ မမြင့်ဌေး ဖင်ကို လိုးနေတာပါလား..။
အေးမြင့် ယောကျာ်းရပြီး ၇ နှစ်အတွင်း တစ်ခါမှ ဖင်မခံဖူးခဲ့ သူမယောကျာ်း တောင်းဆိုသော်လည်း ခဏလုပ်ပြီး နာသောကြောင့် နောက်မပေးတော့ပါ..။ ယခု ဖင်လိုနေသည်ကို တွေ့ရသောအခါ စိတ်ပါဝင်စားစွာ ကြည့်နေမိပါတော့တယ်..။ မနေ့ကထက်လည်း သူမတဏှာစိတ်များ ပြန်ထလာကာ အဖုတ်မှ အရည်များ ပေါင်သို့ စီးကျလာပါတော့တယ်…။
“အွတ် အွတ် အမလေးးးလေးး အအအ”
“နင်ခံနိုင်ပြီမလား… အအ အွတ် အွတ် အွတ်”
“နာတယ် မရသေးဘူး မြန်မြန်ပြီးတော့ နာပါစေ ဆောင့်တော့ “
“အွတ် အွတ် ဘတ် ဘတ် ဘွတ် အွတ် အအ”
ဖင်စအိုမှ လေထွက်သံ၊ နှစ်ယောက်မောဟိုက်သံများဖြင့် ၁၅ မိနစ်ခန့် လိုးပြီး ထိုကတုံးမှာ လီးကြီးကိုထုတ်ကာ လရေများကို မမြင့်ဌေး ဖင်ပေါ်သို့ ပန်းထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်…။
“အူးးး များလိုက်တဲ့ လရေတွေရှင်… နောက်နေ့ ကျွန်မကို တိုက်ရမယ်”
သူမယောင်းမ မမြင့်ဌေးမှာ တဏှာအလွန်ထန်သည်ဟု တွေးမိပြီး အပေါ်သို့ တိတ်တိတ်လေးတက်ကာ အိပ်လိုက်ပါတော့တယ်။
နေ့လည်ခင်း အပူချိန်သည် ပူပြင်းလှသောကြောင့် ချွေးတလုံးလုံးနှင့် ဘဝအတွက် ရုန်းကန်နေကြလေသည်။ စံပြ စားတော်ဆက်ဆိုင်အတွင်း.. စားပွဲထိုးလေး နှစ်ယောက်မှာ ဟိုခုံမှ ဒီကူးလျက် ရှိပါသည်။ skynet မှ ဒွေး၊ ထက်ထက်မိုးဦး နှစ်ယောက်တစ်အ်ိမ်မက် ဇာတ်ကားလွှင့်လျက် ရှိပါသည်။ နံရံတွင် ကပ်ထားသော ပန်ကာလေးလုံးမှာ မလည်ချင် လည်ချင် ပုံစံနှင့် တရွေ့ရွေ့ လည်လျက်ရှိပါသည်။
ပန်ကာနှင့် အနီးဆုံးဝိုင်းမှ လူရွယ်လေးယောက်မှာ စည်ဘီယာ ၄ ခွက်၊ ငါးမုန့်ကြော်၊ ကန်စွန်းပလိန်းတစ်ပွဲ ရှေ့ချကာ.. သူတို့ သဘောကျနေသော မိန်းကလေးတစ်ယောက်အကြောင်းနှင့် ဘောလုံးပွဲအကြောင်းများ ရောက်တတ်ရာရာ ဆွေးနွေးနေကြသည်။ ဆိုင်အပြင်ဘက်ဝိုင်းမှ ကားသမားများ ထိုင်သောဝိုင်းမှ စီးပွားရေးလုပ်ရာ အဆင်မပြေတော့သည့်အကြောင်း ဆီစျေးတက်နေသည့်အကြောင်းနှင့် owner ထောင်မှသာ ကုန်ကားလောကမှာ အဆင်ပြေမည့်အကြောင်း ပြောနေကြပါသည်။
ဆိုင်ရှင် ဦးကျော်ဝင်းမှ ကွမ်းတမြုံမြုံဝါးပြီး.. ငွေစက္ကူများကို အံဆွဲထဲမှထုတ်ကာ ရေတွက်နေလေသည်။ ဆိုင်အနောက်ဘက်မှ မိန်းကလေး နှစ်ယောက် အိုးခွက်ပန်းကန်များဆေးကာ.. မည်သည့်အကြောင်း ပြောဆိုနေသည်မသိ ရယ်မောနေကြသည်။
မအေးမြင့်၏ ပထမဆုံး အလုပ်ဝင်သော နေ့တွင် တွေ့ရသော မြင်ကွင်းဖြစ်သည်။
” ဒီဝိုင်းက ဘီယာနှစ်ခွက် မောင်လေးရေ”
“ဟုတ်ကဲ့ အစ်ကို ဘာသုံးဆောင်မလဲရှင့်”
“၁ သောင်း ၂ သောင်း ကျပါတယ်ရှင့်”
” ဦးကျော်ဝင်း ကြက်စွတ်ပြုတ်က တစ်ပွဲဘယ်လောက်လဲ မသိဘူး သွားရှင်းပေးမလို့”
မအေးမြင့် ဆိုင်စဝင်သောနေ့ကပင် သွက်လက်ချက်ချာသော မိန်းမတစ်ယောက် ဖြစ်သောကြောင့် အလုပ်လုပ်ရာမှာ အဆင်ပြေနေပါတော့တယ်…။ မနက် ၉ နာရီ ဆိုင်ရောက် ဆိုင်မှာ နေ့လည်စာစား ည ၉ နာရီ ညစာစားကာ အိမ်သို့ပြန်ပါသည်။
ဆိုင်တွင် အလုပ်ဝင်သော တစ်လအတွင်း ဘာအခက်အခဲမှ မရှိဘဲ ပထမဆုံး လစာကို သားလေးအတွက်ဆိုကာ ပျော်မဆုံးဘဲ ရှိနေပါတော့သည်။ မအေးမြင့်ရဲ့ အခက်အခဲ အနည်းငယ်မှာ သူမ၏ တောင့်တင်းသော ခန္ဓာကိုယ်၊ ညှိညက်၍ စွဲမက်ဖွယ် ရင်မို့မို့တို့ကြောင့် လာရောက်သော ယောကျ်ားတချို့၏ အကြည့်ရိုင်းများသာ ဖြစ်သည်။ သူမလည်း အပျိုတစ်ယောက် မဟုတ်သောကြောင့် သည်းခံကာ တခါတလေ မိမိလှပသေးသည် ဆွဲဆောင်နိုင်သေးသည်ဟု တွေးထင်ကာ ကြည်နူးမိသော အခိုက်အတန့်များလည်း ရှိမိပါသည်။
တနေ့ သူမ အိမ်သာဝင်နေချိန်.. မီးဖိုချောင်တွင် ပန်းကန်ဆေးနေသော ဆိုင်အကူ ကောင်မလေး နှစ်ယောက် အပြန်အလှန် ပြောနေကြသည်ကို အိမ်သာတက်ရင်း နားထောင်မိသောအခါ သူမ အကြီးအကျယ် ထိတ်လန့်မိသွားသည်။
“ဟဲ့ ဦးကျော်ဝင်းတို့ မအေးမြင့်ကို ချိန်နေပြီထင်တယ်”
“ဟုတ်ပ ဟိုနေ့ကဆို မအေးမြင့် ခုံသုတ်နေတဲ့အချိန် ကြည့်နေတာများ.. ခုန်အုပ်တော့မယ့် ကျားကြီးအတိုင်းပဲ”
“မအေးမြင့်ကလည်း တော်တော် တောင့်တာနော်… ဦးကျော်ဝင်းလို မိန်းမနဲ့ ဝေးနေတဲ့သူမပြောနဲ့ ဆိုင်မှာ လာသောက်တဲ့ လူတွေ လစ်ရင် သူ့ကို စားမတတ် လိုက်ကြည့်နေကြတာ”
“သူရောက်လာတာ လူလည်း တော်တော် ကျလာတယ်နော်”
” ဦးကျော်ဝင်းကို သူ့အတွက်လည်း တွက်ခြေကိုက် သူလည်း စားရဖို့ကြံနဲ့… ဟယ်…ငါတော့ ရိပ်မိတယ်”
“နင်မရောက်ခင်က အစ်မတစ်ယောက်လေ… အခု မအေးမြင့် မရောက်ခင် ယောကျ်ားယူဖို့ ပြန်သွားတယ်ဆိုတာလေ”
“သူဆိုလည်း ဦးကျော်ဝင်းကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရသွားလို့ ငွေပေးပြီး ထုတ်လိုက်တယ် ကြားတယ်”
” ဟုတ်ပ အဲ့အစ်မက ပထမ ရိုးသလိုလိုနဲ့ ဘယ်အချိန် ဖန်စားလိုက်လဲမသိ နောက်ပိုင်း ဦးကျော်ဝင်း ကုတင်ပေါ်မှာကြီးပဲ”
“ဟယ် ကြောက်စရာ မအေးမြင့်လည်း ဘယ်အချိန် သူ့လက်ချက်မိမလဲ မသိ ..”
သူမအကြောင်း ဦးကျော်ဝင်းအကြောင်း ပြောနေသည်ကို ကြားသောကြောင့် တွေးလန့်မိသွားသည်။ သို့သော် မကြားချင်ယောင်ဆောင်ကာ အိမ်သာမှ ထွက်လာပြီး ဆိုင်ရှေ့သို့ ပြန်ထွက်လာခဲ့တော့သည်။
သူမက အပျိုလည်းမဟုတ် ရင့်ကျက်သင့်သလောက် ရင့်ကျက်သော ၃၀ ကျော် မိန်းမပဲ ဒီလောက်တော့ သူမသိပါသည် ရိပ်မိပါသည်။ ဦးကျော်ဝင်းဟာ လူရှင်းချိန် ထိုင်နေသည့်အချိန် စကားမရှိ စကားရှာ လာပြောတတ်သည်။ တခါတလေ အလုပ်အကိုင် စီးပွားရေးအကြောင်း သင်ကြားပေးတတ်သည်။
စားသောက်ဆိုင်အလုပ်ဟာ စေတနာထား၊ ဖောက်သည်အပေါ် လေးစားမူသည် အဓိကဖြစ်ကြောင်း.. အရင်း နှစ်ဆလောက်ကို အမြတ်ရကြောင်း သူမတကယ်လို့ နောင်တချိန် စီးပွားရေးလုပ်သောအခါ စားသောက်ဆိုင် ဖွင့်သင့်ကြောင်း.. ပြိုင်ဘက်ဆိုင်တွေ ဘယ်လောက်ပေါပေါ ကိုယ့်ဘက်က ဖောက်သည်အပေါ် လေးစား သန့်ရှင်းမူ စသည်တို့ရှိရင် ကိုယ့်ဆိုင် နာမည်ရကြောင်း.. သင်ပေးတတ်သည်။ သူမလည်း ဝန်ခံရရင် သာယာမိသည်။ လင်ယောကျာ်းနဲ့ ဝေးသည့်အချိန် ဂရုစိုက်မူရ၍ သာယာမိသည်။ တခါတလေ သူမဆိုင်နောက်တွင်ရှိတဲ့အခါ မတော်တဆ သဘောမျိုး လက်ကိုင်၊ ခန္ဓာကိုယ် ထိမိတာမျိုး လုပ်တတ်လာသည်။
ဆိုင်သို့ အလုပ်ဝင်ပြီး နှစ်လအကြာ….
တစ်ညတွင် မအေးမြင့် ပြန်ခါနီး ထမင်းစား ပန်းကန်ဆေးနေစဉ် ဦးကျော်ဝင်း အနောက်ကနေ လာရပ်ပြီး စကားပြောကာ ရုတ်တရက် သူ့ပစ္စည်းကြီးကို မအေးမြင့် ဖင်ကြီးနဲ့ လာကပ်ထားပြီး ပွတ်နေပါတော့သည်။
“ဟာ ဦးလေး ဘာလုပ်တာလဲ”
” အေးမြင့် ဦး သဘောကျလို့ပါ… မြင်ကတည်းက အေးမြင့်ကို စွဲလမ်းမိတာ အလုပ်ရှင်အနေနဲ့ ထိန်းနေရလို့ပါ”
“ဆိုင်က တခြားလူတွေ မြင်မယ်လေ “
“ဒီတနယ်တကျေးမှာ ဆိုင်လာဖွင့်တာ.. မိန်းမနဲ့လည်း ဝေးနေတာဆိုတော့… အေးမြင့် နားလည်မှာပါ… အေးမြင့်လည်း ယောကျ်ားရဖူးတာပဲ”
ဟုတ်ပါတယ်.. အေးမြင့်လည်း ကော့သောင်းရောက်ပြီး သူ့ယောင်းမ ဖောက်ပြန်သောမြင်ကွင်း သူ့ယောင်းမနဲ့ အသားမဲမဲ ကတုံးတို့၏ ပုံစံမျိုးစုံ ကာမတိုက်ပွဲများကို တွေ့မြင်ပြီးနောက် ယောကျ်ားဆုံးပြီး ပုန်းလျှိုနေသော တဏှာစိတ်များ ပြန်ထလာခဲ့ပြီး သူမကို မထိတထိ လာလုပ်သော အပြုအမူမှာ သာယာနေမိပါသည်။
“အေးမြင့် ဦးကျော်ဝင်းကို နားလည်ပေးပါနော်”
စကားတပြောပြောနဲ့ ဘေစင်မှာ ပန်းကန်ဆေးကာ ရပ်နေသော သူမကို နောက်ကနေ သိုင်းဖက်လာသည်။ ပြီးတော့ သူမ၏ လည်ပင်းကို နောက်ကနေ နမ်းနေပါတော့သည်။ လက်ကလည်း သူမ၏ နို့အုံကို ဖွဖွလေး ကိုင်နေပါတော့သည်။ ထိုမျှမက သူ၏ လျှာကြမ်းကြီးဖြင့် နားရွက်ကို လာကစားနေသည်။ ထို့ပြင် သူ၏ ပစ္စည်းကြီးဖြင့် သူမဖင်ကို ပွတ်နေပါတော့သည်။
ထဘီနဲ့ပုဆိုး ခြားနေသော်လည်း လီးကြီးမှာ မာ၍ ကြီးမားကြောင်း သူမသတိထားမိပါသည်။ ထို့နောက် ကာမစိတ်များထလာ၍ လက်ကို နောက်ကိုပစ်ကာ လီးကြီးကို ဖွဖွလေး ကိုင်ကြည့်လိုက်သည်။
“ဟင် သူဟာကြီးက အကြီးကြီး”
ထို့နောက် ဦးကျော်ဝင်းမှာ ပုဆိုးကို ချွတ်ချကာ လက်ကိုကိုင်ပြီး သူ့လီးပေါ် တင်ပေးလိုက်သည်။ သူမလည်း လီးကို ဖွဖွလေး ကိုင်ကစားပေးနေပါတော့သည်။ ဦးကျော်ဝင်းဟာ တဆင့်တက်ကာ သူမနို့အုံကို ဆော့နေသော ညာဘက်လက်ဖြင့် ထဘီကိုလျှိကာ သူမအဖုတ်ထိ ရောက်လာပါတော့သည်။
သူမတို့နှစ်ယောက် အသက်ရှူသံများ ပြင်းထန်လာကာ မတွေ့ရတာ ကြာပြီဖြစ်သော အိမ်ထောင်ဖက်များ ပြန်တွေ့သည့်ပမာ ခေါင်းကိုဘေးသို့စောင်းပြီး ဦးကျော်ဝင်း နှုတ်ခမ်းကို ဆွဲစုပ်လိုက်ပါတော့သည်။ အပြန်အလှန် နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းယုံသည်မက လျှာချင်းလည်း ရစ်ပတ်ကာ ကစားနေမိပါတော့သည်။
ဦးကျော်ဝင်း ယုယမူ လက်ဖြင့်ပွတ်ပေးတာ ကျွမ်းကျင်မူ သွက်လက်မူကြောင့် အဖုတ်မှာ အရည်များ စိုရွဲလာသည်နှင့်အမျှ လျှာကစားသည်မှာ မြန်ဆန်လာပြီး သရေများ ပေကျံနေကာ သူ့လီးကြီးကိုင်ရတာ အားမရတော့ဘဲ အားရပါးရ ဂွင်းတိုက်ပေးလာမိတော့သည်။ ည ၁၁ နာရီအချိန် ပတ်ဝန်းကျင် တိတ်ဆိတ်မူနှင့် ညလေပြေအေးတို့ကို ထိုးဖောက်ကာ အသက်ရှူသံများ ကာမရမက်များက ကြီးစိုးနေပါတော့တယ်..။
“အ အအ အအအ”
ဦးကျော်ဝင်းလီးမှ လရည်များ ပန်းထွက်ကာ သူမ၏ လက်တွင် အများကြီးကျန်ခဲ့ပြီး သူမထဘီမှာလည်း ကြမ်းပြင်များကို ရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်..။ နှုတ်ခမ်းချင်း အငမ်းမရ နမ်းသည်ကို မရပ်သေးဘဲ သူမအဖုတ်ကို ဆက်တိုက်မွှေနေသောကြောင့် သူမပေါင်မှာရော အရည်တွေ မနည်းမနော စီးကျနေကာ ဒူးမခိုင်သောကြောင့်
“တော်ပြီ တော်ပြီ ဦးလေး”
ပြောသောအခါမှသာ ဦးကျော်ဝင်းမှ ရပ်လိုက်ပြီး ပြုံးကြည့်နေပါတော့တယ်။ သူမလည်း ဘေစင်မှာ လက်ဆေးဖို့ ကြည့်လိုက်တော့မှ
“ဟယ် အရည်တွေ အများကြီးပဲ”
“အေးမြင့်ဟာလေးလည်း ထွက်တာပဲ ဒီမှာကြည့်”
စောက်ရည်တွေ ရွဲစိုနေသော သူ့လက်ကို ထောင်ပြပြီး ဦးကျော်ဝင်းဟာ
လရည်များကို ဆေးကြောပြီး အဝတ်အစား ပြင်ဆင်ကာ
“ပြန်တော့မလို့လား မပြန်ပါနဲ့ဦး “
သူမကို သိုင်းဖက်ကာ ပြောလာသော ဦးကျော်ဝင်း ပုံစံကြောင့် ကြည်နူးမိပြီး
“ဒီနေ့တော့ ကုတင်ပေါ် မတင်နဲ့ဦး ဒီလူကြီး”
“နောက်နေ့ ကုတင်ပေါ် တက်မှာပေါ့ ဒါဆို”
မျက်စောင်းထိုးကြည့်လိုက်ပြီး အိမ်ပြန်လာပါတော့တယ်။ ဦးကျော်ဝင်းမှာ သူမနောက်ကျောကို ကြည့်ပြီး ရည်ရွယ်ချက် အောင်မြင်တယ်ဟူသော ကျားတကာထက် ကျားဆိုးအကြည့်ဖြင့် ပြုံးကြည့်နေပါတော့တယ်..။
မအေးမြင့်လည်း အိမ်ပြန်ရောက်သောအခါ သူ့ယောင်းမ အိပ်ပျော်နေသည်ကို တွေ့သောကြောင့် သူလည်း ခြေလက်ဆေးကာ တခါတည်း ဝင်အိပ်လိုက်ပါတော့တယ်…။
နောက်နေ့ မနက်စောစော အိမ်အောက်မှ ဆူညံသံများကြောင့် နိုးလာပါတော့တယ်..။ ရာသီဥတုမှာ မိုးလေးတဖျောက်ဖျောက်နဲ့ ပြန်အိပ်ချင်လောက်အောင် ဆွဲဆောင်နေသော်လည်း အိပ်လို့မဖြစ်ဆိုကာ အားတင်းပြီး မျက်နှာသစ်ရန် အောက်သို့ ဆင်းလာမိပါတော့တယ်။
“ဟာ အေးမြင့် နိုးလာပြီလား..”
သူ့ယောင်းမ မမြင့်ဌေး ရုတ်တရက် နူတ်ဆက်လိုက်သောကြောင့်
“ဟုတ်တယ်အစ်မ .. အလုပ်လည်း ဒီနေ့ ၈ နာရီလောက် စောစောသွားမလို့”
“ဒီမှာလေ ကိုအောင်ဝင်း ပြန်လာလို့လေ.. ကိုအောင်ဝင်း ဒါလေ မောင်လေးမိန်းမ.. ရှင်ကားထွက်ပြီး နောက်နေ့ပဲ ရောက်တာ”
မမြင့်ဌေးပြောလို့ ကြည့်လိုက်ရာ ကိုအောင်ဝင်းမှာ အသားညိုညို အရပ်ခပ်မြင့်မြင့်ရှိပြီး ခန္ဓာကိုယ်တောင့်တင်းတင်း ဆံပင်ထူထူ ဖရိုဖရဲရှိကာ အကြည့်မှာ စူးရှကြောင်း သတိထားမိလိုက်သည်။
” အင်း ညီမရေ အစ်ကိုက အမြဲကားထွက်နေရတော့ ညီမရောက်နေတာ မမြင့်ဌေးလည်း အဆင်ပြေတာပေါ့ မပျင်းရတော့ဘူးပေါ့.. သားကလည်း ဘော်ဒါရောက်နေတော့ အိမ်က မဟုတ်ရင် တိတ်ဆိတ်နေတာ… ကိုယ့်အိမ်လို သဘောထားပေါ့”
သူမလည်း စကားအနည်းငယ်ပြောကာ မျက်နှာသစ် သွားတိုက် အဝတ်အစားလှဲပြင်ဆင်ကာ ဆိုင်သို့ ထွက်လာခဲ့ပါတောသည်။
ဆိုင်ရောက်သောအခါ လူအနည်းငယ်ရှင်းကာ စားပွဲထိုးလေးများ ခုံများခင်းကျင်းခြင်း.. ကြမ်းပြင်များ အမှိုက်လှဲခြင်း သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းများ လုပ်နေကြသည်။ သူမဟာ ဆိုင်အနောက်သို့ ဝင်သွားပြီး ချက်ပြုတ်နေကြသော မိန်းကလေးများအား
“ဟဲ့ ဆိုင်ရှင် ဦးကျော်ဝင်းရော”
“အပေါ်မှာအစ်မ… စာရင်းလုပ်နေတာလား မသိဘူး”
“အော် အေးအေး ဒီနေ့က ရုံးပိတ်ရက် လူကျလောက်တယ်… မြန်မြန်လေးလုပ်ကြ”
သူမလည်း ခိုင်းစရာရှိတာခိုင်း ပြင်ဆင်စရာရှိတာ ပြင်ဆင်ပြီး.. ဦးကျော်ဝင်းရှိရာ အပေါ်ထပ်သို့ စျေးဝယ်မည့် စာရင်းယူရန် တက်လာခဲ့သည်။ အပေါ်ရောက်သောအခါ စားပွဲတစ်ခုပေါ်တွင် ဦးကျော်ဝင်း စာရင်းလုပ်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရပြီး
“ကျွန်မ စျေးစာရင်း လာယူတာ..”
” စျေးစာရင်းက ခိုင်းပြီးပြီ.. အေးမြင့်ရယ်… လာပါဦး ဒီအနားကို ညကတည်းက လွမ်းကျန်ရစ်နေတာ”
သူမ အနားကပ်သွားသောအခါ ဦးကျော်ဝင်းမှာ ပွေ့ဖက်ပြီး…
” ညက လွမ်းနေတာ အေးမြင့်ရယ်.. ဒီကိုယ်သင်းနံ့လေးကို လွမ်းနေတာ..”
ဦးကျော်ဝင်းမှာ သူမလည်ပင်း နဖူးတို့ကို နမ်းရှုံ့ပြီး သူမဖင်ကြီးများကို နယ်နေပါတော့တယ်။ သူမလည်း အသက်ရှူသံများ ပြင်းရှလာကာ.. ဦးကျော်ဝင်း ရင်ခွင်ထဲ အတင်းတိုးဝင်နေမိပါတော့တယ်..။
ထို့နောက် ဦးကျော်ဝင်းမှာ သူမထဘီကိုချွတ်လိုက်ပြီး အဖုတ်ကို ပွတ်နေပါတော့တယ်။ နဖူးတို့ကို နမ်းနေသည်ကို ရပ်တန့်ပြီး သူမနူတ်ခမ်းလေးကို စုပ်ယူလိုက်ပါတော့တယ်။ သူမလည်း ရုတ်တရက် ကြောင်ငေးကာ လုပ်သမျှ ခံနေပါတော့တယ်။
ဦးကျော်ဝင်းမှာ အဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးကို လက်ကလေးနဲ့ ပွတ်ကစားလိုက် အစိလေးကို ဖွဖွလေး ပွတ်ပေးလိုက်နဲ့ နူးနေသောကြောင့် ၅ မိနစ်ခန့်အကြာ သူမအဖုတ်မှာ အရည်များ ထွက်လာပါတော့တယ်…။
“အောက်မှာ အလုပ်သမားတွေ ရှိတယ်လေ သူတို့သိရင် ကျွန်မ အရှက်ကွဲလိမ့်မယ်”
“ဘယ်သူမှ တက်မလာဘူး .. ဒီတခါတော့ မနေ့ကလို မထားခဲ့ပါနဲ့တော့..”
ဦးကျော်ဝင်းမှာ နမ်းနေသည်ကိုရပ်ပြီး ရုတ်တရက်သူမကို ဆွဲလှည့်၍ အကြမ်းတရမ်း စားပွဲပေါ် လက်ထောက်ခိုင်းကာ အောက်ခံဘာင်းဘီကို ဆွဲချွတ်ပြီး နောက်မှ‌ အဖုတ်ထဲ လီးကြီးကို ထိုးထည့်လိုက်ပါတော့တယ်…။
“နာတယ်ရှင့်… တော်တော့… ရှင်နော် အကြမ်းပတမ်း…”
လီးကြီးမှာ အဖုတ်ထဲ တဝက်ဝင်နေပြီး အကြောများ ထောင်နေကာ…
“ကျွန်မယောကျာ်း ဆုံးကတည်းက မခံရသေးဘူးရှင့် ဖြေးဖြေး…”
ဦးကျော်ဝင်းမှာ လီးကြီးကို ဖြေးဖြေးနှဲ့ကာ ထည့်ပြီး… မအေးမြင့်မှာလည်း မခံရတာ ကြာပြီဖြစ်သောကြောင့် လီးဝင်လာသည်ကို အားရပါးရ ခံစားလိုက်ပါတော့တယ်….။
လီးကြီးကို အဆုံးထိ ဝင်ပြီးမှ
“ကလေးအမေသာပြောတယ်… လီးဝင်တာ ကြပ်နေတာပဲ အေးမြင့်လေးရယ်…”
“ရှင်အမြန်လုပ်တော့… ဖြည်းဖြည်းလုပ်… အောက်ကကြားနေဦးမယ်…”
ထို့နောက် ဦးကျော်ဝင်းနှင့် အေးမြင့်မှာ ကာမတိုက်ပွဲကို စတင်လိုက်ပါတော့တယ်..။
“အွတ် အွတ် ဖွတ် ဖွတ် အအအအ”
“အအအအအ အွတ် အွတ် အွတ် ဇွတ်”
“အွတ် အအအအ အွတ် ဖတ် ဖတ်”
“ဖြည်းဖြည်း တိုးတိုး… အအအ”
ဦးကျော်ဝင်းမှာ ဖင်ကြီးကိုကိုင်ပြီး.. ဗိုက်တရွဲရွဲနဲ့ အားကောင်းမောင်းသန် ဆောင့်နေပုံမှာ.. အားပါလှပြီး.. သန်မာခြင်း လီးကြီးမှာလည်း မာခြင်းတို့ကြောင့် မအေးမြင့်မှာလည်း သူ့ယောင်းမ ဖောက်ပြန်တာ မြင်ပြီး ပေါ်လာသော ကာမစိတ်များ အရှိန်များ ပြန်တက်လာကာ ဖင်ကြီးကို နောက်သို့ပစ်ကာ ပြန်လည်ကော့ပေးနေပါတော့တယ်…။
“ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် အအအအ”
“အွတ် အွတ် အွတ် အအအ ဖတ် ဖတ်”
မအေးမြင့် စောက်ဖုတ်မှာ စောက်ရည်များ စည်းကျလာကာ လီးကြီးကို ထုတ်လိုက်သော အခါမှာလည်းလရည်များ စောက်ရည်များဖြင့် ပေကျံနေပါတော့တယ်…။
ထို့နောက် မအေးမြင့်ကို စားပွဲပေါ် တက်ခိုင်းပြီး ခြေနှစ်ဖက်တင် ပေါင်ဖြဲထိုင်ခိုင်းကာ.. လီးကြီးကို ထပ်ထိုးထည့်လိုက်ပါတော့တယ်။
“အအအအ အွတ် အွတိ အအအအအ အွတ် အွတ် အူးးး”
“အအအ ကောင်းတယ်..လိုး လိုး…”
မအေးမြင့်လည်း အံတကြိတ်ကြိတ်ခံကာ.. ဦးကျော်ဝင်းမှာ ကျွဲကဲ့သို့ ဆောင့်လိုးပါတော့တယ်..။
“အွတ် အွတ် အအအအအအအားးးးးးးးး”
မိနစ် ၂၀ ခန့်လိုးပြီး ဦးကျော်ဝင်းမှာ လရည်များကို ပန်းထုတ်ကာ လရည်များမှာ အဖုတ်ထဲတွင်သာမက ခုံများ ကြမ်းပြင်များတွင်ပါ ပေကျံနေပါတော့တယ်…။ မအေးမြင့် အဖုတ်ထဲမှ လီးကြီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်သောအခါ
“ရှင့်လီးကြီးက ကောင်းလိုက်တာ အခုလည်း အရည်တွေနဲ့ ပြောင်လက်နေတာပဲ..”
“နောက်လည်း ဒီလီးနဲ့ လိုးပေးမယ်..”
“ဟွန်း သူများက စားချင်နေတာများ…”
ဦးကျော်ဝင်းမှာ သူမအဖုတ်လေးကို ဖြဲကြည့်ပြီး..
“ပန်းပွင့်လေးက စပ်လိုက်တာ နာကောင်းလေး… မခံရတာ ကြာလို့လားမသိ… ကျွန်မအောက်ဆင်းတော့မယ်… အောက်က အလုပ်သမားတွေ ရိပ်မိမယ်”
“ရော့ တစ်ရူး သုတ်လိုက်.. အပေါ်ထပ် အိမ်သာမှာဆေးလိုက်”
“အရည်တွေ သူ့ဟာကြီးက ထွက်တာ အများကြီး.. ဒီလီးကြီးတော့.. ချိုးလိုက်မယ်နော်”
“ချိုးလိုက်လေ အေးမြင့်လေး ငတ်သွားမှာပေါ့”
“ဟားးး ဟားးး ဟားးးး”
နှစ်ယောက်သား ငါးမိနစ်ခန့်ဖက်ကာ kissing ရိုက်ပြီး.. အိမ်သာထဲ ဆေးကြောသန့်စင်ကာ ဆိုင်အောက်ထပ်သို့ အလုပ်လုပ်ရန် ဆင်းလာခဲ့ပါတော့သည်။
ဆိုင်တွင် တစ်နေကုန် အလုပ်လုပ်ပြီး ည ၅ နာရီခန့်လောက်မှ မနက်က ရေကုန်ယမ်းကုန် ဦးကျော်ဝင်းနဲ့ လုပ်ခဲ့မိသောကြောင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေပြီး အိမ်သို့ စောစောပြန်နားရန် စဉ်းစားမိသည်။ ကောင်တာမှာ ထိုင်နေသော ဦးကျော်ဝင်းအား…
“ကျွန်မ ဒီနေ့ နေသိပ်မကောင်းလို့ စောစော ပြန်နားမလို့..”
“အင်း ..ဆိုင်မှာက လူကျနေတာမှ… အင်း ပြန်နားလေ… ရပါတယ်..”
“ဟုတ်ကဲ့ ဒါဆို ကျွန်မ ပြန်လိုက်ဦးမယ်နော်”
“အော် ခဏ ခဏ အေးမြင့်ရေ နင့်ယောင်းမတို့အဖို့.. အညာက လက်ဆောင်လေး ထည့်ပေးချင်လို့ အပေါ်ခဏလိုက်ယူ”
ဆိုင်အပေါ်ထပ် တက်သွားသော ဦးကျော်ဝင်းနောက်သို့ လိုက်ပါတက်သွားခဲ့ပြီး သူ့အခန်းထဲ ရောက်သောအခါ…
“ဒီမှာ ကုတင်ပေါ် ခဏထိုင်ပါဦး..”
“ပေးစရာရှိ အမြန်ပေးလိုက်ပါလားရှင်… ကျွန်မ မနက်ကတည်းက နုံးချိနေတာ… ဒီနေ့ လူကျနေတာ… တနေကုန် နားရတယ်ကို မရှိပါဘူး…”
“အင်းပါ ပေးမှာပါ မပေးခင်လေးလေ….”
ဦးကျော်ဝင်းမှာ ရုတ်တရက် သူမထိုင်နေသော ကြမ်းပြင်ရှေ့ ထိုင်ချပြီး ပေါင်ကိုဖြဲ ထဘီကို လှန်သောအခါ..
“ခဏပါ အေးမြင့်ကလည်း ဘာမှမပြောနဲ့”
သူမအတွင်းခံကို ဆွဲချွတ်လိုက်သောအခါ.. တနေကုန် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်၍ ချွေးများ ထွက်နေသောကြောင့် အဖုတ်နံမှာ ပြင်းရှစွာ ထောင်းခနဲ ထွက်လာပါတော့တယ်…။ ဦးကျော်ဝင်းမှာ မရွံမရှာ အဖုတ်နံကို သေချာစွာ နမ်းရှိုက်ကာ လျှာဖြင့် လျက်ပါတော့တယ်….။
“တနေကုန် ပေကျံနေတာ မလုပ်ပါနဲ့ မရွံဘူးလား”
“ဦးက ဒီလိုအနံပြင်းပြင်းမှ လျက်ချင်တာ… အနံပြင်းတော့ ပိုစိတ်ဖြစ်တယ်… ပိုလျက်ကောင်းတယ်လေ… အေးမြင့် ပန်းဖူးလေးကလည်း ကြည့်ပါဦး”
သူမရဲ့ အဖုတ်အကွဲကြောင်းတလျှောက် လျှာဖျားလေးများဖြင့် စကလိပါတော့သည်။ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားများကိုလည်း နှုတ်ခမ်းဖြင့် ကိုက်ဆွဲ၍ မသိမသာ လှန်ပြဲနေသော အဖုတ်အကွဲကြောင်းထဲ လျှာထိုး၍ သူမအား ပြုစုနေသောကြောင့် အရည်များ စိုထွက်လာကာ စောက်ရည်နံ့များ အခန်းထဲ လွင့်ပျံ့နေပါတော့သည်။
“ပြွတ် ပြွတ် ပလပ် ပလပ် ပလပ် ပလပ်”
“အူးးးးအူးးးးးးးအူးးးပြွတ် ပြွတ် ပလပ် ပလပ်”
ထိုမျှမက ကွမ်းစားထား၍ ထူကာကြမ်းနေသော လျှာကြမ်းကြီးဖြင့် အစိကို ထိုးကစားနေခြင်း.. လျှာကြမ်းကြီးဖြင့် အဖုတ်ပြင်လိုက် ယက်နေခြင်းကြောင့် သူမ ခံလို့ကောင်းနေကာ ကောပြန့်နေမိပါတော့သည်။
“အီးးးးး ပြွတ် ပလပ် ပလပ် ပလပ် ပြွတ်”
“အီးအူးးးးး သတ်နေတာလားရှင့် ကောင်းလိုက်တာ…”
“အရည်တွေ အများကြီး ထွက်နေပြီ တော်လိုက်တော့….”
“အီးးးးး အူးး ပလပ် ပလပ်”
နာရီဝက်ခန့်အကြာ ဦးကျော်ဝင်းရဲ့ လျှာအစွမ်းကြောင့် သူမလည်း မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ပြီး အရည်များထွက်ကျကာ ပြီးသွားပါတော့သည်။
“အူးးးးး လူကိုဖျော့သွားတာပဲ၊ ပါးစပ်မှာလည်း ပေကျံနေတာ သုတ်လိုက်ဦး…”
ထို့နောက် ကုတင်ဘေးမှာ အဝတ်စဖြင့် အဖုတ်ကိုသုတ်နေရင်း
“ယောင်းမတို့အတွက် လက်ဆောင်ဆို ဘယ်မှာလဲ..”
“ဘယ်ကသာပေးရမှာ စားပွဲထိုးလေးတွေရှိလို့… အေးမြင့်ရယ် မရိပ်မိအောင် လျက်ချင်နေတာ တနေကုန်”
” ဟွန်း.. တော်တော်လည်တယ် စားနေကျ ကြောက်ဖားကြီး”
“မဟုတ်ပါဘူး အေးမြင့်ရယ် စောစောပြန်ခိုင်းတာက တခြားအလုပ်သမားတွေမြင်ရင် သူတို့ကြ ပြန်မရဘူးလား လုပ်မယ်…။ အခုက ဘေးနားမှာ တရုတ်ဆိုင်တွေက ဖွင့်ထားတာ စီးပွားက အပြိုင်ဖြစ်နေပြီ။ တို့မြန်မာဆိုင်တွေက အလုပ်ကို အပေါ်ယံပဲလုပ်တာ..။ ဟိုက သေချာစနစ်ကျကျ သူ့အလုပ်ကို အသက်လောက် ဂရုစိုက်လုပ်ကြတယ်..။ မြန်မာတွေက နဲနဲဆို မလုပ်ချင်ကြဘူး။ အခုက ဆိုင်တွေများတော့ ပြိုင်ရမယ့် အချိန်လေ။ တခြား မြန်မာဆိုင်တွေက ပြိုင်ရမယ့်အစား မနာလိုပဲ ဖြစ်နေကြ။ မနာလိုတော့ သူလည်းစီးပွားမဖြစ် ဘာမှမထူး။ တို့တွေ မြန်မာအကျင့် ပြောသာပြောတာ ကိုယ်ကိုတိုင်လည်း အဲ့လိုအကျင့်ပဲ ဖြစ်နေတာ။ စီးပွားရေးကို အခုမှ ပြန်တည်ဆောက်ထားရတာ အေးမြင့်လေးရယ် နားလည်ပေးပါ..”
“ဟွန်း အလုပ်လည်း ကြိုးစား.. လျက်ပေးတာလည်းကောင်း… လိုးတုန်းကလည်း ကောင်းချက် တော်တော်တတ်နိုင်တဲ့ လူကြီး”
“ဟားး ဟားးး ဟားး”
ထို့နောက် အဝတ်အစားပြင်ဆင်ကာ အိမ်သို့ပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်။
အိမ်သို့ ပြန်ရောက်လာသောအခါ အိမ်မှာ တစ်ယောက်မှ မရှိသောကြောင့် အခန်းထဲဝင်ကာ တကိုယ်လုံး နံစော်နုံးချိနေသောကြောင့်.. အိပ်ရာပေါ် ပစ်လှဲလိုက်ပါတော့တယ်….။ သူမ မှေးခနဲ အိပ်ပျော်သွားပြီး ည ၁ နာရီခွဲလောက်အချိန် တရေးနိုးလာကာ ကိုယ်လက်သုတ်သင်မယ်ဆိုပြီး အောက်သို့ဆင်းလာခဲ့ပါတော့တယ်။
“ဒုတ် ဒုတ် အအအ အွတ်…”
ကုတင်လှုပ်သံများ လိင်ဆက်ဆံသံများ ကြားသောကြောင့် သူမယောင်းမတို့ လိင်ဆက်ဆံနေကြသည်ဟုတွေးကာ အိပ်ခန်းထဲ ချောင်းကြည့်လိုက်ပါတော့တယ်။
မြင်ရသော မြင်ကွင်းကြောင့် အံသြမိသွားသည်။
သူမ မြင်နေရသော မြင်ကွင်းမှာ သူ့ယောင်းမ မမြင့်ဌေးကို သူမယောကျာ်း ကိုအောင်ဝင်းနှင့် အရင်နေ့ညက လာလာလိုးနေသော အသားမဲမဲ ထွားကျိုင်းကျိုင်းလူက နှစ်ယောက်ညှပ်ပြီး လိုးနေခြင်းဖြစ်သည်။
“ဒါဆို ဟိုလူနဲ့ ငါ့ယောင်းမက ဖောက်ပြန်နေတာ မဟုတ်ဘူးပဲ… သူ့ယောကျာ်း ကိုယ်တိုင်က ခွင့်ပြုထားတာပဲ”
မမြင့်ဌေးမှာ သူမယောကျာ်း ကိုအောင်ဝင်းလီးကို အငမ်းမရ စုပ်နေကာ အသားမဲမဲလူမှ လှေကြီးထိုးနည်းနဲ့ ဆောင့်လိုးနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသူလိုးချက်များမှာ ပြင်းထန်ပြီး ဆောင့်လိုက်တိုင်း မမြင့်ဌေးမှာ တအွတ်အွတ်နဲ့ ကုတင်မှာ လူပ်ရမ်းနေပါတော့တယ်။
“အွတ် အွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ်”
ကြည့်နေရင်း အေးမြင့်မှာ ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးကျော်ဝင်း လျက်ထားတာ မကြာသေးသော အဖုတ်မှာ ကာမစိတ်များ ပြန်ထလာပြီး စောက်ရည်များ စိုရွှဲလာပါတော့တယ်။
“အွတ် အအအအအ အအအအ”
ထိုအသားမဲမဲလူမှာ အရှိန်ပြင်းစွာ ဆောင့်နေတာကို ခဏရပ်ပြီး ကိုအောင်ဝင်းနဲ့ နေရာချင်း လဲလိုက်ပါတော့တယ်။ ထိုအချိန် အဖုတ်ထဲမှ လီးချွတ်တဲ့အခါ သူ့ယောင်းမ အဖုတ်မှာ ပြဲလန်ကာ အသားနီများ ပေါ်နေပြီး စောက်ရည်များ လရည်များ ရွဲနေတာကို မြင်လိုက်ရပါတော့တယ်။
ထို့နောက် ကိုအောင်ဝင်းမှာ ထိုအဖုတ်ထဲသို့ လီးကြီးကို ထပ်ဆောင့်ထည့်ကာ ထပ်လိုးပါတော့တယ်။ မမြင့်ဌေးမှာ လရည်များ စောက်ရည်များနှင့် အသားမဲမဲလူရဲ့ လီးကြီးကို ပါးစပ်ထဲငုံကာ စုပ်‌နေပါတော့တယ်။
“အွတ် အွတ် ဖွတ် ဖွတ် အွတ် အအ”
“အအအအ အွတ် အွတ် အအ”
သူတို့လိုးပွဲမှာ အရှိန်ပြင်းထန်နေပြီး မမြင့်ဌေး စုပ်ပေးနေသော လီးကြီးမှ လရည်များ ပန်းထုတ်သောအခါ မမြင့်ဌေးမှာ သူ့ယောကျာ်းရှေ့မှာပင် လရေများကို လျက်ပစ်ပါတော့တယ်။ ကိုအောင်ဝင်းမှာလည်း ဆောင့်အားပြင်းထန်လာကာ
“အွတ် အွတ် အွတ် အအအအ”
“ဖတ် ဖတ် အအအ အအားးးး”
ကိုအောင်ဝင်း ပြီးသွားသောကြောင့် အဖုတ်ထဲမှ လီးကို ချွတ်လိုက်သောအခါ လရည်များ အဖုတ်ဝတွင် ပြည့်လျှံနေပါတော့တယ်။
ထိုမြင်ကွင်းကို ချောင်းကြည့်နေသော တစ်ခုလပ်မလေး အေးမြင့်မှာ အဖုတ်ထဲမှ မရိုးမရွ ဖြစ်နေကာ အခန်းထဲမှ ကာမဆက်ဆံသော အနံ့များ အပြင်ထိရောက်ကာ အေးမြင့်ခင်မျာ ဝင်အလိုးခံချင်နေပါတော့တယ်။
သူတို့သုံးယောက် ပြီးသွားသောအခါ အတူတူ ဖက်အိပ်ပြီး နမ်းတလှည့် ကိုင်တလှည့် လုပ်နေသောကြောင့် အေးမြင့် ရေမချိုးတော့ဘဲ တိတ်တိတ်လေး သက်ပြင်းချ အခန်းထဲ ပြင်ဝင်လာပါတော့တယ်။
ဖတ်ရှုကြိမ် စုစုပေါင်း : 6,168
← အားလပ်ရက် စွန့်စားခန်း
စမ်းမြရဲ့သား (သို့မဟုတ်) ငါလိုးမသူငယ်ချင်း →